Spain 1-0 Czech Republic: La Roja Oo Gool Soo Daahay Uu Dhaliyay Gerard Pique Ku Badisay Ka Dib Tiki-taka Lagu Daalay. | Haqabtire News
Spain 1-0 Czech Republic: La Roja Oo Gool Soo Daahay Uu Dhaliyay Gerard Pique Ku Badisay Ka Dib Tiki-taka Lagu Daalay.
Gool soo daahay uu dhaliyay daqiiqadii 87aad daafaca reer Spain Gerard Pique ayaa guul u horseeday xulka difaacanaya koobka qaramada Yurub ee La Roja iyadoo 1-0 kaga takhalusay xulka Czech Republic oo difaacasho adag soo bandhigay ciyaartii ka dhacday Toulouse. Spain ayaana haatan Group D waxa ay seddex dhibcood la wadagaan xulka Croatia kuwaasoo shalayto ka badiyay xulka Turkiga.
David de Gea ayaa soo gabagabeeyay dooda ku saabsaneyd cida noqoneysa goolhayaha koowaad ee xulka Spain ka dib markii uu ku soo bilowday kulankii maanta inkastoo uu dhawaan qeyb ka ahaa fadeexada kiiska Torbe, halka Alvaro Morata uu dhanka weerarka ku soo bilowday marka loo eego Aritz Aduriz, iyadoo David Silva uu saftay kulankiisii 100aad ee xulka La Roja.
Spain ayaa sidii laga filayay iska heysatay ciyaarta qeybteedii hore iyagoo kubada heystay boqolkiiba 75 waxaana ay ciyaarayeen kubada tiki-taka ee baasaska badan laakiin fursado dhowr ah oo ay heleen qeybtii hore waxaa ka beeniyay Petr Cech kaasoo weli soo bandhigaya inuu ka mid yahay goolhayayaasha ugu fiican caalamkma.
Fursadii ugu fiicneyd uguna horeysay ee ciyaarta waxaa heshay xulka Spain markii Juanfran uu kubad garabka midig ugu dhigay David Silva kaasoo durbadiiba kubada soo karoosay waxaa kubada helay Alvaro Morata oo damcay inuu kubada shabaqa ku taabto laakiin Petr Cech ayaa si fantastik ah kaga badbaadiyay.
Nusa saac markii ay socotay ciyaarta Morata ayaa kubad loo dhex bixiyay isagoo hakaday marka hore ka hor inta uusan darbo ku tuurin goolka, Petr Cech ayaa faraha ku taabtay kubada ka hor inta aysan u bixin kooner. Cech ayaana mar kale kubad ka badbaadiyay Jordi Alba daqiiqadii 41aad ee citaarta. Waxaana qeybtii hore lagu kala nastay barbaro goolal la’aan ah.
Taakalkii ugu fiicnaa ciyaarta: Morata oo qalad ku galay calanwadaha qeybtii hore.
Labo daqiiqo markii ay socotay qeybtii labaad ee ciyaarta, Czech ayaa ku dhawaatay inay gool iska dhaliyaan iyadoo kubad loo soo dhigay Morata uu dib u heliyay laakiin Hubnik ayaa ku dhawaaday inuu shabaqa iska dhex dhigo ka hor inta aysan kubada birta ku dhicin banaankana u sii bixin.
Daqiiqadii 58aad Czech ayaa fursad helay ka dib laad xor ah oo la soo qaaday uu lugta la helay Hubnik laakiin De Gea ayaa si sahlan u badbaadiyay. Balse fursadii ugu fiicneyd ee ay heshay Czech waxa ay timid daqiiqadii 65aad markii kooner ay soo tuureen uu madax la helay Gebre-Selassie, kubada ayaa ku socotay goolka laakiin waxaa si fantastik ah u soo bixiyay Fabregas oo kubada ka soo bixiyay xariiqda goolka.
Spain ayaana fursado yaryar heshay daqiiqadihii ku xigay iyadoo Jordi Alba uu qasaariyay kubad qurxoon uu u dhigay David Silva, halka xiddiga khadka dhex ee Man City uu isna darbo xoogan hareer mariyay goolka markii Iniesta uu kubad u taagay.
Spain ayaa waqti dhumis badan ku sameyneysay xerada goolka Czech iyadoo Iniesta kubad uu darbeyn karo ka doorbiday inuu baaso daqiiqadii 80aad, iyadoo isla waqtigaas uu Thiago Alcantra oo bedel ku soo galay ciyaarta uu fursad fiican helay balse intii uu kubada toosinayay ayay Czech ka difaacdeen, xulka Czech ayaana soo bandhigay qaab ciyaareed difaacasho oo Talyaaniga ay ka dhigaya kuwa sharfan.
DAQIIQADII 87aad GOOOL!!! Iniesta ayaa karoos fiican oo aad u macaan soo qaaday iyadoo Gerard Pique uu noqday xiddigii ugu bootinta dheer isagoo kubad madax ah dabamariyay goolhaye Petr Cech oo aan goolkiisa ka soo bixin isagoo rajeynayay in difaacyadiisa ay furtaan laakiin ma aysan dhicin, Spain ayaana hogaan u qalantay u qabatay ciyaarta.
Daqiiqadii 2aad ee seddex daqiiqo oo ciyaarta lagu daray ayay Czech Republic ku dhawaadeen inay helaan goolka barbaraha markii Darid uu kubad ku helay afka hore ee xerada goolka, laakiin darbadiisa xooganeyd waxaa soo bixiyay goolhaye De Gea oo badbaadiyay xulka Spain, waxaana ay ciyaarta ku soo idlaatay 1-0 ay Spain ku badisay iyagoo guul ku bilowday tartanka Euro 2016.Halkaan haqabtirenewstv.net ka daawo goolka ay Spain kaga badisay Czech Republic.